Bogga ugu weyn 20 Goobo Socdaal oo Qiimo -dhimis leh oo Bilaash ah, Huteelo, iyo Tigidhada Jaban
Haddii ay jirto hal shay oo dadka intiisa badani ku raaxaystaan ​​inay sameeyaan, waa safar. Laakiin markay ka fikiraan qiimaha hoteellada, tigidhada duulimaadka, iyo adeegyada kirada, waxay qaataan nasasho. Sababtaas awgeed, waxay had iyo jeer ku jiraan raadinta goobo safar dhimis ah oo ka caawin doonta inay yareeyaan kharashaadka.
Nasiib wanaag, bogag badan oo socdaal ayaa bixiya qiimo dhimis ku saabsan iibsashada safarka. Iyada oo ay bixiyaan goobahan, waxaad badbaadin kartaa lacag iyo xitaa lacag lagu siiyo in lagu safro mid kasta oo Shaqooyinkooda ah.
Xaqiiqdii, websaydhadan safarka dhimista ayaa kaa caawin kara inaad la kulanto safar raaxo leh qiimo jaban oo aad u keydiso safarkaaga xiga.
Laakiin, maskaxda ku hay in ay bixiyaan heshiisyo dhimis micnaheedu ma aha in ay bixiyaan adeegyo jaangooyo ka yar. Qaar badan oo ka mid ah goobahan ayaa bixiya isla waaya -aragnimada safarka ee weyn.
In kasta oo ay jiraan boqolaal meelahan, waxaan go'aansannay inaan ku siinno liiska kuwa ugu fiican. Marka maqaalkan, waxaad ka heli doontaa aragtida shimbiraha websaydhada safarka dhimista.
Jadwalka tusmada hoose wuxuu ku siinayaa dulmar guud ee dhammaan bogagga.
20 Goobaha Socdaalka Dhimista Ugu Fiican
Haddii safarka dhimista uu yahay hadafkaaga, waxaa jira kumanaan websaydh oo kaa caawin kara raacid bilaash ah, Huteelo, iyo tigidhada jaban. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah kuwa ugu fiican.
Duulimaadyada Jaban ee Scott
Baadhid: 5 Caymiska Safarka Ardayga ee ugu Fiican: Waxa uu Daboolayo iyo Sababta aan ugu Baahanahay.
Booking.com waa mid ka mid ah suuqyada safarka ugu weyn adduunka ee sumadaha la aasaasay iyo ganacsatada labadaba. Goobtan socdaalku waxay siisaa qiimo dhimis nooc kasta oo hoy ah: huteelada, villa, hoteelada, fursadaha sariirta & quraacda, ama guryaha martida.
Kayak sidoo kale waa mid ka mid ah goobaha safarka dhimista ugu fiican oo caan ku ah socdaalayaasha ku habboon raadinta xulashooyinka isbarbardhigga. Tani waa sababta oo ah waxay ka dhigaysaa isbarbardhigyo meelaha kale ee safarka.
Taasi waxay ku jirtaa Kayak, waxaad ka heli kartaa heshiiska ugu fiican, ha ahaato mid toos uga yimid shirkadooda ama mid ka mid ah tartamayaasheeda.
#3. Duulimaadyada Jaban ee Scott
Duulimaadyada raqiiska ah ee Scott sidoo kale waa mid ka mid ah goobaha safarka dhimista ee mudan in la hubiyo!
Goobtani waxay dabagashaa qiimayaasha duulimaadka iyo isbaddallada la taaban karo iyadoo la adeegsanayo raadinta webka iyo softiweer kormeer. Markay tilmaamayso isbeddel, emayl ayaa isla markiiba loo diraa xubnahooda oo wata macluumaad la xiriira isbeddelka cusub.
Waxay ku jiri kartaa waddooyinka la heli karo, qiimaha, ama qiyaasta inta qiimaha uu socon doono.
Orbitz waa degel kale oo safar dhimis ah oo dhinac ka ah qiima dhimista ay bixiso marka aad ballansato, waxay bixisaa barnaamijyo abaalmarin oo dheeraad ah.
XIDHIIDHKA: 34 Hadiyadaha ugu Fiican $ 5 (Ama Ka Yar!) Waxaad u Heli Kartaa Kuwaad Jeceshahay 2022
Isticmaalayaal caadi ah, waxaad dhisi kartaa dheelitirnaanta dhibcaha abaalmarinta oo waxaad ku kaydin kartaa in ka badan ballantaada xigta.
On Orbitz, waxaad ka helaysaa 5% dhibco marka aad ballansanayso hudheelkaaga adoo adeegsanaya Orbitz iyo 3% markaad isticmaaleyso kombiyuutar. Boggan socdaalku wuxuu kaloo bixiyaa kaarka deynta oo kaa caawin kara inaad kasbato abaalmarino badan.
Sidoo kale Fiiri; 25+ Qaababka ugu raqiisan ee lagu safro 2022 | Socdaal badan & kharash yar
Priceline waa mid ka mid ah goobaha safarka dhimista ugu fiican ee ku siiya xulashooyin badan marka aad ku qorto meesha aad rabto inaad aado. Waxay kaloo leedahay astaamo kuu oggolaanaya inaad keydiso haddii aad rabto inaad ballansato duullimaadyada iyo hoteellada waqti isku mid ah.
Waxa ku xiga liistadayada goobaha safarka dhimista ugu fiican waa Hotels.com. Bogan, waxaad ka heli kartaa boos celin hoteel huteel kasta. In kasta oo aad ballansan karto duullimaadyada iyo safarka, haddana ballanta hoteellada ayaa ah waxa ugu weyn.
Waxa xiisaha lihi, huteel kasta oo ballansanaya, waxaad helaysaa qiimo dhimis 50% ah. Hadda, sida Orbitz, waxaad kasban kartaa abaalmarino qiimahoodu yahay nus milyan ama qiimaha tobanka habeen.
Oo si aad u hesho abaalmarintan, waa inaad ugu yaraan 10 habeen ku hoteelka aad ka ballansatey Hotels.com.
#7. Goobaha Miisaaniyadda
Goobaha Miisaaniyadda waa wakiil socdaal oo onlayn ah oo diiradda saaraya Yurub. Waxaad raadin kartaa hoteellada iyadoo ku xiran gobolka, magaalada, ama xitaa astaamaha maxalliga ah ee aad rabto inaad ka ag dhawaato.
Waxaad heleysaa liis huteelo iyo hoteello ku xiran raadintaada waxaadna badbaadin kartaa heshiis hufan marka loo eego xaddiga caadiga ah.
La mid ah Priceline waa Expedia. Boggan wuxuu bixiyaa adeegyo jaale oo kuu oggolaanaya inaad ballansato hoteellada, doonyaha, baabuurta kirada ah, iyo fasax qiimo jaban. Waxa xiiso leh, waxaad ka heli doontaa qiimo dhimis iyo adeegyo dheeri ah hoteellada qaarkood markaad is -qorto.
TripAdvisor waxay bixisaa ballansashada safarka. Waxaad u ballansan kartaa makhaayad iyo boos celis dalxiis, duulimaadyo, hoteello, safarro iyo dalxiisyo. Intaad taas samaynaysid, waxaad akhrin kartaa dib u eegista macaamiisha kale.
Moreso, goobtani waxay leedahay barnaamij leh is-dhexgal saaxiibtinimo leh oo kaa caawin kara inaad si fudud u ballansato.
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Noqdo Wakiil Socdaal Oo Ka Socda Guriga 2022 | Talaabooyinka Fudud
Trivago waa goob kale oo bixisa tigidhada qiimaha jaban ee laga helay Agoda. Si kastaba ha ahaatee, waxba kuma soo kordhin qiimahaas, taas beddelkeedana waxay doorbiday inay si weyn u aragto qiimaha sare ee Booking.com ee qoraalka cagaaran ee weyn.
Soo-jeedinta Agoda oo qiimaheedu hooseeyo ayaa kaalinta labaad gashay natiijadii ugaadhsiga hoteelka, oo lagu muujiyay qoraal cawlan oo aad u yar oo ay la socdaan dhawr kale.
#11. Duulimaadyada Google
Duulimaadyada Google waa mid ka mid ah goobaha safarka ugu jaban ee kuu oggolaanaya inaad raadsato duulimaad u dhexeeya laba meelood.
XIDHIIDHKA: Sideen ugu Iibiya Gaadhigayga Junk Lacag Badan | 2022
Talo -bixintu waxay kuu soo jeedinaysaa duulimaadka ugu fiican ee aad ku socoto waxayna ku siinaysaa ikhtiyaarka inaad ku ballansato hoteelka iyo baakadaha fasaxa oo buuxa.
Ikhtiyaarkan wuxuu leeyahay sicir qiime oo muujinaya duulimaadyada la heli karo oo raqiis ah. Moreso, goobta Google Flights, waxaad kula socon kartaa qiimayaasha duulimaadyada ee waddooyin kala duwan.
Hotwire waa degel kale oo safar dhimis ah oo kaa caawin kara inaad lacag keydiso. Boggan, waxaad ka raadin kartaa duulimaadyada, hoteellada, iyo baabuurta kirada ah ee diyaar u ah ballansashada.
Moreso, ikhtiyaarka goobta socdaalka wuxuu siinayaa boos dabacsanaan. Markaa haddii aad u dabacsan tahay bixitaankaaga iyo wakhtiga imaatinkaaga, Hotwire waa u qalantaa inaad u tagto.
Travelocity waa adeeg kale oo socdaal online ah oo si fiican loo yaqaan. Sida xirmooyinka kale ee safarka ee waaweyn, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ballansato tigidhada, hoteellada, baabuurta kirada ah, safarrada iyo baakadaha fasaxyada oo buuxa.
Waxa kale oo ay bixisaa barnaamij isdiiwaangalin ah oo aad iska qori karto si aad u kaydiso ilaa 10% inta aad joogto hoteellada ka qaybgalaya.
Travelocity ayaa sidoo kale sii deyneysa dalabyada xubinta gaarka ah iyo sidoo kale dallacsiinta dadweynaha. Laakiin waxaa mudan inaad isha ku hayso shabakadda si aad u aragto haddii aad ka heli karto gorgortan ku saabsan meel aad jeceshahay inaad isku daydo.
Airbnb waxay ballansatay in ka badan 50 milyan oo habeen adduunka oo dhan waxayna noqotay xariirkii kiraynta magaalada oo guulaystay. Martidu waxay si toos ah ula xiriiri karaan martigeliyaha, arki karaan sawirrada qolalkooda, kala hadli karaan lacag -bixinta iyo xitaa inay wax ku iibsan karaan shabakadda.
Nabadda maanku waxay la timaaddaa ballanqaad ka yimid martigeliyaha kaas oo bixiya caymis dhan $ 50,000.
Waxaa jira xisaabiyaha weyn oo kuu oggolaanaya inaad cabbirto inta lacag ee aad samayn karto adigoo taxay. Waxaad sidoo kale ku xiriiri kartaa isticmaaleyaasha kale iyadoo lagu saleynayo danaha guud.
TravelZoo weli waa degel kale oo xirmo safar fasax ah oo kuu oggolaanaya inaad ku wada ballansato hal meel.
Si kastaba ha ahaatee, madalkani waa mid xiiso leh in ay haystaan ​​qoraayaal badan oo si firfircoon dib ugu eegaya dalabyadii xirmada fasaxa ee ugu dambeeyay.
Goobtani waxay ku habboon tahay inaad ballansato duulimaad marka aadan maskaxda ku hayn meeshaad ku xigto iyo markaad u baahan tahay mid ka raqiisan.
Fiiri: Lacag lagu siiyo Socdaalka: Shaqooyinka ugu Fiican ee aad yeelan karto
Jetsetter waa daabacaad socdaal oo onlayn ah oo waliba bixisa adeegyo jaale si ay kaaga caawiso helitaanka heshiis huteel.
XIDHIIDHKA: 10 Meelood oo aad ka Iibsato Taleefan la isticmaalay 2022
Awoodda ugu weyn ee kaydinta waxay ka timaaddaa iibinta tooska ah ee mareegaha. Waa kuwo cimri-gaaban, laakiin haddii aad hesho mid ka mid ah heshiisyadan, waxaad badbaadin kartaa boqolkiiba 50 ama ka badan qiimaha hudheelka ee hudheelka.
Haddii aad rabto inaad wax ka barato safarka oo aad xoogaa isku -duubni ku yeelato meesha aad ku socoto safarkaaga xiga, iibkaan tooshka ah ayaa laga yaabaa inuu u qalmo daawashada.
Viator waa shabakad socdaal oo kuu oggolaanaysa inaad ballansato dalxiisyada iyo waxqabadyada shirkadaha dalxiiska iyo hagaha qiimo dhimis. Si aad u hesho heshiisyo iyo qiimo dhimis, iska qor warsidaha emaylka Viator.
#18. Meeraha Lonel
LonelyPlanet.com waa shabakad socdaal oo hormuud ah oo bixisa adeegyada ballansashada. Waxaad ka dalban kartaa hoteellada iyo hudheelada, diyaaradaha, socdaalada, iyo kiraynta baabuurka goobta.
Soo jeedinta qiimaha dhabta ah ee Lonely Planet waa macluumaadka laga soo ururiyey daabacaada hagaha socdaalka oo aad u badan.
Agoda.com waa wakiil socdaal oo onlayn ah iyo mashiinka raadinta metadata ee hoteellada, kireysiga fasaxa, duulimaadyada, iyo wareejinta garoonka.
Waa aagga Agoda Company Pte. Ltd. waxay ku saleysan tahay Singapore waxayna ka tirsan tahay Booking Holdings. Qiyaastii kala badh ballansashada Agoda waxaa lagu sameeyaa barnaamijyada moobiilka.
#20. Hoteelada Iskujira
HotelsCombined, oo ah mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee ballansashada hudheelka, waa madal-raadinta maadada oo raadisa mareegaha kala duwan si ay u helaan hoteelada ugu fiican, sida OTA-yada, iyo sidoo kale goobaha hoteelka.
Natiijooyinka raadinta waxaa ku jira xulashooyin dhowr ah oo ka yimid isla ilaha oo kuu oggolaanaya inaad isbarbar dhigto qaababka qolka kala duwan.
HotelsCombined waxay soo bandhigeen huteelo badan oo madaarka ah natiijooyinkii ugu sarreeyey, kuwaas oo ka leexday qiimaha guud ee safarkaaga oo dhan, halkii ay ka ahaan lahayd qiimaha habeenkii ugu caansan.
Waa maxay sicir -dhimista Goobaha Socdaalka waa Fadeexad
In kasta oo kumanaan websaydh oo socdaal ah oo bixiya heshiisyo dhimis, haddana waxaa jira qaar ka mid ah goobaha socdaalka ee la dhimay oo aan sharci ahayn. Marka, waxaa muhiim ah inaad ogaato qaar ka mid ah kuwa caanka ah si aad uga fogaato inuu dhibbane noqdo.
Tigidhada Diyaaradaha Bilaashka ah
Ka-dhaafitaannada Waxyeellada Waxyeellada Gaadhiga-Kirada Baabuurka
Bait iyo Switch
Bogagga Facebook ee Been Abuurka ah
Tigidhada Beerta Madadaalada Bilaashka ah
Emailada Xaqiijinta Duulimaadka Been Abuurka ah
Craigslist iyo khiyaanooyinka Airbnb
Goobaha Hotel Bogus
Dib u qiimeyn
25+ Qaababka ugu raqiisan ee lagu safro 2022 | Socdaal badan & kharash yar
Dib -u -eegista Ventures -ka Adduunka 2022: Fadeexad kale oo Adeegga Safarka ah ama Maxay tahay?
Dib -u -eegista App Cile AAdvantage MileUp 2022: Kaarka Deynta Abaalmarinta Safarka ugu Fiican?
Sida Loo Maalgaliyo Shirkad Gaar Loo Leeyahay 2022 | Maxaan Fiiriyaa
17 Kaararka Amaahda ee Ugu Fiican ee Lacag -bixinta Xisaabta ee 2022
10-ka Ferrari ee ugu Qaalisan Adduunka|2022
Ferrari waa mid ka mid ah shirkadaha baabuurta sameeya ee ugu caansan adduunka waana mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan…
Sida Loo Iibsado Guri Aan Lacag Lahayn 2022: 7 Siyaabood Oo Sharci Ah
Sida laga soo xigtay WSJ, ku dhawaad ​​saddex-meelood laba meel kireystayaasha dalka oo dhan waxay yiraahdaan ma awoodaan inay iibsadaan guri, iyo keydinta…
10 Dukaanno Fiidiyaha Ciyaaraha Fiidiyowga ee ugu Fiican ee Dhallinta iyo Dadka Waaweyn 2022 -ka
Ciyaaraha fiidiyaha ayaa soo maray waddo dheer tan iyo markii la aasaasay si ay qayb weyn uga noqdaan maalin kasta…
Sida loo iibiyo wicitaanada la daboolay: Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Wicitaanada daboolan waa istaraatijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ay adeegsadaan maareeyayaasha sanduuqa hedge, ciyaartoy suuqa ah, iyo maalgashadayaasha gaarka ah.…
21 Siyaabaha Ugufiican ee Loogu kasbado Dhibcaha Google Play ee Bilaashka ah. Hagaha buuxa
Waa wax aan macquul aheyn in la ogaado waxa dukaanka Google Play yahay haddii aad leedahay Android…
15-ka Apps ee qoraalka ugu wanaagsan iPad-ka 2022
Imaanshaha tignoolajiyadu waxay saamaysay qayb kasta oo ka mid ah hawl-maalmeedkeena. Dhab ahaantii, qayb kasta iyo warshaduhu waxay leeyihiin…